Filannoo Keeniyaa: Filannoon haqamuun walqabate mana murtii Olaanaa ‘nan sirreessa’ jedhe Kenyaattaan - BBC News Afaan Oromoo
Filannoo Keeniyaa: Filannoon haqamuun walqabate mana murtii Olaanaa ‘nan sirreessa’ jedhe Kenyaattaan
Preezidantii Keeniyaa kan ta'an Uhuuruu Keniyaattaan, erga manni murtii olaanaa biyyatti filannoon prezidaantii inni ittiin mo'achu isaa torbaan lamaan dura labsate kufee, irra deebiin filannoo akk gaggeefamu murteeseen booda, biyyi koo dhimma haqaan walqabate rakkina keessa jirti jechuun dubbataniiru.
Deebii'e yoon filatamees mana murtii kana 'sirriin galcha' jechuun kakataaniiru.
Dogogoroota sagalee lakkaawuun walqabatee filannichi irra deebiin guyyoota 60 keessatti akka gaggeefamu kan mana murtichaatiin dabarfamees Jimaata darbe ture.
Keeniyaattaan haasawa ummataaf murtichaan booda taasisaniinis, murtee kenname nan kabajaa jechuudhaan biyyattiin akka tasgabooftuuf yaaluun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee sochii na filadhaaf taasisan irratti ammoo, murticha yoo fudhatan illeen abootii seeraa mana murtii olaanaa 'jalloota' jechuun moggaasaniiru.
Kenyaan irra deebiin filannoo akka gaggeessituuf murtaa'e
Filanoon pireezidaantii Hagayya 8 geggeefamee akkuma kan bara 2007 tti jeequmsa walfakkaata fiduu danda'a jedhamee sodaatamee ture.
Itti Aanaa Prezidaantii biyyatti Wiiliyaam Ruuttoo, koomishiniin filannoo guyyaa filannichaa dafee akka murteessuuf waamicha taasisuun, aangoo irra kan jiru paariin Jubilii kanaaf qophiidha jedhaniiru. Paartii mormitu NASA tti kaadhimaamaa prezidaantii kan ta'an Raayilaa Odiingaa garuu, koomishiniin kun amanamumaa isaa waan dhabeef jijjiramuu qaba jechuun dubbataniiru.
Manni murtii himata paartiilee siyaasaa mormitootaa fudhachuun murtii mo'achuu nama aangoo irra jiruu haqamuun irra deebiin filannoon akka gaggeefamu yoo murtee dabarsu kun Ardi Afrikaatti kan jalqabaa ta'uun isaa beekameera.
'Kana keessa deeb'inee ilaalun dirqiidha. Ifatti rakko qabna,' jechuun Keniyaataan waa'ee mana murtii sanaa haasaa isaanii keessatti gafa Sanbata duraa dubataniiru.
Jeequmsi bara kana ture akka isa bara 2007 hama hin ta'iin malee, bakka bakkatti darbee darbee jeequmsi tureen yoo xiqaate namoonni 28 du'aaniiru.
Koomishoniin filannoo Keeniyaa, garaa garumma sagalee milioona 1.4tiin Keniyaattaan mo'achuu isaa haa labsan malee paartiin mormitoota Odingaan geggeefamu garu mana murtii olaana biyyichaati oliyyanna galfachuun fallammii gochaa turuunsa ni yaadatama.
Murtii jimaata godhameen, Hangafni Abban Murtii biyyatti kan ta'an Deeviid Maraagaa, hagayya 8 irra filannoon geggeefame heera biyyaatii kan hinhordofiin waan ta'eef 'fudhatama kan hinqabnee fi kufaadhaa' jedhaniru.
Murtiin kennamee kun Prezidaant Kenyaattaas ta'e paartii isaanii fi akkaataa duulli nafiladhaa itti geggeefama ture irratti yaaka dhiheesse hinqabu..
Nama wagga 72 Odiingaan, murtii kana ilaalchisee 'kun uummata Keenyaafis ta'e ardi Afriikaa waligalaaf guyyaa seena qabeessa' jedhanniru.
Fillanno godhame sana booda, daawwatoonni Tokkummaa Awroopaa, Tokkumma Afriikaa fi Ammerrikaa irraa dhufan, dogogorri qabatamaa ta'e akka hingodhamiin eeruudhaan, Odingaan akka mo'amuu isaa fudhatuu waamicha gochaa turuun isaani ni yaadatama..
Goodayyaa suuraa Raayilaa Odiingaa (gidduu kan taa'ee) wayita murtee kenname gamachuun simatan